चीन पेंट ब्रश निर्माताहरु र आपूर्तिकर्ताहरु - पूर्वी Argon रासायनिक
तेल आधारित रंग
विरोधी संक्षारक रंग
पानी आधारित रंग
पानी आधारित रंग प्राइमर
भित्री भित्ता पेन्ट
बाहिरी भित्ता पेन्ट
साँच्चै स्टोन पेन्ट
अन्य रंग र कोटिंग्स
घर > उत्पादनहरु > रंग उपकरण > पेन्ट ब्रश
Epoxy जस्ता रिच प्राइमर
Polyurethane सुन्तला अन्न रंग
Polyurethane पाक रंग
पेन्ट ब्रश निर्माताहरु
पेन्ट ब्रश ह्यान्डल र राम्रो कपाल वा flannelette बाट बनेका छन्, र ती प्राय सजावटी निर्माण स्थलहरुमा चित्र को प्रक्रिया मा देखा पर्छन्।
पेंट ब्रश सुँगुर कपाल ब्रश र ऊन ब्रश मा विभाजित गर्न सकिन्छ। उनीहरु संग ठूलो रंग सामग्री, राम्रो लोच, स्थायित्व, कोमलता, चिकनीपन, राम्रो leveling, लचीलो र बुझ्न को लागी सजीलो, संचालित गर्न सजिलो, निर्माण को समयमा चिकनी हात अनुभूति छ, र समान रूप मा पेंट गर्न सकिन्छ र film्ग को फिल्म चिकनी र वर्दी को सतह बनाउँछ। मोटाई मा। यो चित्रित सतह मा ब्रश लाइनहरु र bristles छोड्न सजिलो छैन। यो कम रंग हानि छ र एक ठूलो हद सम्म रंग लागत बचाउन सक्छ। यो सानो क्षेत्र भित्ता चित्रकला वा आंशिक मर्मत को लागी उपयुक्त छ। पेन्ट ब्रश द्वारा ब्रश भित्ता पालन गर्न र भित्ता मा घुसाउन को लागी सजिलो छ, र रंग फिल्म अधिक स्थिर छ।
रंग ब्रश एक अपेक्षाकृत परम्परागत, सरल र सार्वभौमिक लागू ब्रशिंग उपकरण हो। यो आवेदन को एक विस्तृत श्रृंखला छ र चित्रकारी ठाउँ द्वारा सीमित छैन। यो विभिन्न सामाग्री र आकार लेपित गर्न को लागी उपयुक्त छ। एकै समयमा, यो कोटिंग को विविधता को लागी धेरै अनुकूलनीय छ, र तेल आधारित कोटिंग्स, सिंथेटिक राल कोटिंग्स, र पानी आधारित कोटिंग्स सबै लागू छन्।
सुँगुर कपाल ब्रश
सुँगुर कपाल ब्रश सुँगुर bristles बाट बनेको एक कपाल ब्रश हो। सुँगुर bristles, सामान्यतया सुँगुर कपाल को रूप मा जानिन्छ, घाँटी र एक सुँगुर को पछाडि, सामान्यतया5सेमी माथि मा बढ्दै bristles को सन्दर्भ गर्नुहोस्।
उच्च ग्रेड ऊन ब्रश को लाख ठूलो मात्रा मा हुन्छ, प्रवाह leveling सेक्स राम्रो छ, समान रूपमा बाहिर रंग थुक गर्न सक्नुहुन्छ, लाह सतह चिकनी छ, मोटाई लगातार छ।
चीन मा एक पेशेवर पेन्ट ब्रश निर्माताहरु र आपूर्तिकर्ताहरु को रूप मा, ईस्ट आर्गन केमिकल अनुकूलित को निर्माण को समर्थन गर्दछ पेन्ट ब्रश। एकै समयमा, सबै उत्पादनहरु फैशनेबल, उन्नत, टिकाऊ र उत्तम दर्जेको, र CE प्रमाणीकरण छन्। हाम्रा उत्पादनहरु को उच्च गुणस्तर आंशिक रूपमा छ किनकि हामी हाम्रो आफ्नै कारखाना छ र आंशिक रूपले हामी अनुभवी र कुशल कामदारहरु छ। के तपाइँ थोक पेन्ट ब्रश लाई समर्थन गर्नुहुन्छ? निस्सन्देह, यदि तपाइँ थोक, हामी तपाइँलाई सस्तो मूल्य, छुट र उद्धरण प्रदान गर्न सक्छौं। यसको अतिरिक्त, यो छुट उत्पादनहरु किन्न ठीक छ। यदि तपाइँ हामी संग सहयोग गर्न र उत्पादन किन्न चाहानुहुन्छ, हामी यसलाई कम मूल्य मा बेच्न सक्छौं। जस्तै भनिएको छ: सहयोग एक जीत-जीत हासिल गर्न! हामी तपाइँ संग सहयोग र एकसाथ साझा विकास साकार गर्न को लागी तत्पर छौं।
Add: No.8 Dongya रोड, Nianli टाउन, Qujiang जिल्ला, quzhou शहर, झेजियांग प्रान्त
प्रतिलिपि अधिकार © २०२१ Zhejiang पूर्वी Argon रासायनिक I/E कं, लि। -चीन तेल आधारित रंग, पानी आधारित रंग निर्माताहरु, रंग उपकरण सबै अधिकार सुरक्षित।